Orodyahanka Mo Farah Oo Doonaya Inuu Caawiyo Ciyaaryahanada Arsenal Ee Dhaawacma - jornalizem
Orodyahanka Mo Farah Oo Doonaya Inuu Caawiyo Ciyaaryahanada Arsenal Ee Dhaawacma
Orodyahanka Britain ee ku guuleystay labada biladood tartankii Olombikada adduunka Mo Farah ayaa doonaya in uu gacan siiyo kooxda Arsenal oo kamid ah kooxaha ka dhisan London oo uu si aad ah u taageero.
Orodyahanka reer Jamaica Usain Bolt ayaa hore u sheegay in uu jecel yahay in uu u ciyaaro Manchester United, balse halyeyga London 2012 Mo Farah ayaa ku faraxsan in uu si uun qeyb ugaga noqdo kooxda uu illaa yaraantiisii taageeri jirey ee Arsenal.
Horyaalka 5,000 iyo 10,000m ee Olombikada ayaa sheegay in dhuubnaantiisa awgeed inuu rajaynayo inuusan wax badan ka tari karin Premier League , balse waxa uu u malaynayaa in uu bari karo ciyaaryahanada Emirate Stadium inay ka soo kabtaan dhaawacooda.
Sida ay qortay Mirror Mo Farah oo ku dhashay magaalada Muqdisho ayaa yiri:
“Uma malaynayo inaan ciyaarta kubbada cagta ku fiicanahay balse waxaan jeclahay in aan caawiyo kooxda Gunners,”
“Waxaan la hadlayay maalin dhoweyd xaaskeyga waxana aan ku iri waxaan noqon karaa tababare ciyaaryahanada dhaawacan ama wax sidaa oo kale ah,’”ayuu sii raaciyey.
“Waxaan isku dayi karaa inaan caawiyo ciyaartoyda dhaawaca uu soo gaaro ama xilliyada adag ku jira, waan awoodaa inaan waxyaabo yaryar u qabto.”
Farah ayaa si cad marwalba u sheega jacaylka uu u qabo kooxda ka dhisan waqoyiga London kuwaasoo aan koobna ku guuleysan tan iyo koobkii FA Cup 2005.
Hase yeeshee isla waqtigaas, Farah waxa uu urursaday 10 biladood oo dahab ah,shan qalin ah iyo mid maar ah oo uu ka qaatay tartano caalamka oo idil ah iyo qaar wadamada Yurub oo kaliya ah.
Marka waxaa dhici karta ayay qortay Mirror in nasiibka uu leeyahay Mo Farah in ay ka saacidi karto sidii ay Arsenal dib ugu soo laaban lahayd inay ku guuleysato koobab.